पिएको तलब खान नपाएपछि सांसद आक्रोशित | Tungoon
पिएको तलब खान नपाएपछि सांसद आक्रोशित
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले गत पुसदेखि सांसदका पिएको तलब उनीहरुकै खातामा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । पिएको तलब आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका कतिपय सांसद यसबाट आक्रोशित भए । उनीहरुले संसद सचिवालयमा गएर गुनासो समेत गरे ।
‘स्वकिय सचिवको पारिश्रमिक काटिएपछि सांसद र केहि समितिका सभापति समेत आएर झोक्किनुभो । यसअघि मासिक जाने रकममा कटौती भएपछि उहाँहरु आवेशमा आएको पाइयो । सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र समिति सभापतिको खातामा त यसअघि जाने गरेको रकममा धेरै नै कटौती भयो । सम्झाई–बुझाई गर्नै गाह्रो भयो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
‘हामीले पुसदेखि लागु हुनेगरी स्वकिय सचिव तथा पदाधिकारीको सचिवालयका कर्मचारीको तलब निजहरुकै खातामा राख्ने निर्णय गर्यौँ । अझै पनि सबै सांसदले आफ्ना स्वकीयको विवरण उपलब्ध गराइसक्नुभएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने ।
Previousहुम्ला हवाई सम्पर्कविहीन
Nextउपमहानगरको ६३ लाख भोजभतेरमै स्वाहा !
जगमै अड्कियो भ्यूटावर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै चरम भेद्भाव !
आज देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई वर्षाको सम्भावना, आगामी तीन दिन कालीगण्डकी, तिनाउ लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह